Tabaha ugu fiican ee looga faa'iideysto OnePlus 5T | Androidsis
Eder Ferreño | | Mobiles, Khiyaamada Android, Tababarada
Mid ka mid ah taleefannada taagan xilligan dayrta waa OnePlus 5T. Nooca sare ee dhamaadka ah ee summada Shiinaha ayaa lasoo bandhigay qiyaastii seddex usbuuc ka hor tan iyo markaasna ma uusan joojin qabashada cinwaannada. Waa qalab leh rajo badan ayey kicisay iyo inay leedahay wax walba oo ay ku noqon karto iibgeeyaha ugu wanaagsan. Marka waxaa laga yaabaa inay sifiican u iibiso Kirismaska.
Laakiin, sida taleefannada oo dhan, had iyo jeer waa la heli karaa tabaha qaar si aad uga faa'iidaysato. Isla waa isku mid OnePlus 5T. Sidaa darteed, waxaan kaaga tageynaa adiga tabaha ugu fiican ee OnePlus 5T.
Thanks to tabahaan wax badan ayaad ka heli doontaa qalabka ee sumadda Shiinaha. Sidaa darteed, waayo-aragnimadaada isticmaale ayaa si cad u kordhay.
1 Si dhakhso leh u fur kamaradda
2 Shaashad Quful
3 Dhaqaaq habka habeenkii
4 Beddel barnaamijyada sida caadiga ah u fura
5 Dhaqdhaqaaqyo dhaqso ah
6 Habee barta hoose
7 Habee bilawga iyo astaamaha
Si dhakhso leh u fur kamaradda
Haddii aad rabto sawir deg deg ah qaado waxaan ubaahanahay nooc toobiye ah si aan ufududeeyo. OnePlus 5T wuxuu na siinayaa ikhtiyaarkaas. Karaa dhaqaajiso kamaradda adigoo riixaya badhanka awoodda laba jeer. Aad u raaxo badan oo ku habboon haddii aan rabno inaan sawir qaadno waqti cayiman. Waa inaan tagnaa Dejimaha> Dhaqdhaqaaqa oo waannu u hawlgelin karnaa sida aannu jecel nahay.
Dabcan, waxaan dooneynaa inaan ilaalino qalabkeena sida ugu macquulsan. Sidaas, waxaan ku dari karnaa nidaamka amniga shaashadda qufulka. Waxa ugu fiican ayaa ah in qalabku na siinayo ikhtiyaarka aan ku dooran karno midka aan aad u jecel nahay. Waxaan isticmaali karnaa qaab, PIN ama adeegsan karnaa dareeraha faraha ama aqoonsiga wajiga. Xulashada midka aan ugu jecel nahay waa mid fudud sida loo socdo: Dejinta> Amniga.
Dhaqaaq habka habeenkii
Wax had iyo jeer aad u raaxo badan oo ku habboon haddii aan telefoonka isticmaalno habeenkii. Karaa hagaaji iftiinka shaashadda si loo yareeyo At OnePlus 5T waxaan dhaqaajin karnaa habka habeenkii fudayd weyn. Sidaas darteed, dhib naguma keeneyso dhalaalka shaashadda. Waxaan si fudud u tagnaa: Dejiyeyaal> Muujin> Habka Habeenkii. Halkaas habaynkan caawa ayaa lagu hawlgeliyaa qalabka.
Beddel barnaamijyada sida caadiga ah u fura
Isticmaalayaal badan waa wax aad u dhib badan. Nasiib wanaag, waxaan fursad u leenahay inaan tan ku badalno OnePlus 5T. Dejinta> Araajida (Barnaamijyada)> Default waa wadada loo maro in lagu gaaro tan. Halkaas ayaan ka dooran karnaa haddii aan rabno fur asal ahaan, ama ficil gaar ah oo aan ku beddelno wax kasta oo aan dooneyno.
Dhaqdhaqaaqyo dhaqso ah
ka dhaqdhaqaaqyada ayaa faa'iido badan yeelan kara. Tan iyo markii aan marin u heli karno qalab ama codsiyo kala duwan oo ku saabsan qalabka. OnePlus 5T wuxuu na siinayaa xulashooyin badan si aan u qaabeyno tilmaamahan. Waxaan leenahay ikhtiyaarka ah ku wareeji dhaqdhaqaaqyada qaarkood si aad u furto codsiyada ama aaladaha sidan taleefanka. Laga soo bilaabo Dejinta> Dhaqdhaqaaqa waxaan ku habeyn karnaa wax walba si aan u jeclaan karno qaab fudud.
Habee barta hoose
Ikhtiyaar kale oo aad u faa'iido badan ayaa ah astaysto qaybta hoose ee OnePlus 5T. Dejinta> Badhamadu waa habka loo maro si loo sameeyo. Isla halkaas ayaan ku go'aansan karnaa sida aan u dooneyno inaan u adeegsanno baarkan hoose si aan uga faa'iideysano. Fursadaha ayaa badan. Marka ujeedku waa wax ku doortaan iyada oo ku saleysan sida aan u isticmaalno taleefanka. Sidaa darteed, isticmaalkeedu aad ayuu noogu raaxaysan doonaa.
Habee bilawga iyo astaamaha
OnePlus had iyo jeer wuxuu u taagnaa inuu ka mid noqdo noocyada bixiya ikhtiyaarrada habayn badan adeegsadayaasha. Waxaan sidoo kale awoodnaa astaysto launcher iyo astaamaha Qalabka. Markaa shaki la'aan waa wax ay adeegsadayaal badani ku qancaan. Waxaan si fudud u tagnaa shaashadda weyn iyo hoos u qabo. Marka xigta waxaan helnaa xulashooyin kala duwan (darbiyada, dejimaha iyo wijitooyinka). Haddii aan galno goobaha waxaan haysanaa xulashooyin habeyn badan. Waan ka beddel furaha si aad u dhigto astaamo cusub ama u beddelaan animations.
Kuwani waa tabaha ugu fiican ee OnePlus 5T. Waxaan rajeynaynaa in iyaga oo mahadsan ay kuu fududaan doonto inaad isticmaasho taleefanka shirkadda. Ka sokow awoodda inbadan waxbadan kasamee heerkan sare iyaga oo adeegsanaya. Maxaad u malaynaysaa khiyaamadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada ugu fiican ee OnePlus 5T
Youtube waxay soo saari doontaa adeeg cusub oo rukumo ah: Red + Play Music